Distrikan’Atsimondrano Vao ny antsasak’ireo kaominina no nahazo Tosika Fameno
Miditra amin’ny adiany fahadimy ao anatin’ny fihibohana isika eto amin’ny Faritra Analamanga sy ireo faritra hafa ahitana ny tsimok’aretina coronavirus ankehitriny.
Kaominina Ampitatafika Olona sahirana 2.000 isa nahazo fanampiana
Sambany no nisy olona an’arivony sahirana nahazo fanampiana indray miaraka tao anatin’ny kaominina Ampitatafika, distrikan’Atsimondrano.
Vary avy any ivelany 16 000 taonina no efa nafarana
Faritra miisa 13 no mamokatra sy mamatsy ny vary eto Madagasikara amin’izao fotoana izao.
Ambohidahy Nogiazan’ny polisy ny henankisoa iray sarety
Nogiazana tao amin’ny kaomisarian’ny boriboritany voalohany na CSP1, etsy Analakely,
Tao Antetezana, kaominin’i Foulpointe, no notontosaina izany ka zanakazo miisa 600.000 no novolena tamin'ny velarantany 400 ha izay niarahan'ireo sampandraharaha maro miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana nandray anjara. Sehatra samihafa toy ny sekoly sy fiangonana ary ireo distrika mandrafitra iny faritra iny no nandray anjara ka mitotaly 778,5 ha ny velaran-tany voavoly zanakazo ary miisa 1.271.933 ho an’ny DREDD Atsinanana tamin’ny fanokafana rezionaly. Nosafidiana manokana ny tao Antetezana, Distrikan’i Brickaville no nanaovana ny fanokafana rejionaly, hoy hatrany ny talem-paritra, noho ity toerana ity hatao rakotr’ala satria mahafeno ny fepetra amin’ny velarantany misy ala hitazonana ny entona karbaonina hiarovana ny tontolo iainana, hoy hatrany ny fanazavana. Tsy hijanona amin’izao fanokafana izao ny fambolen-kazo, hoy ny fanazavana, fa hitohy mandra-pahatapitry ny taona. Ny zanakazo rahateo efa vonona ka entanina ny rehetra mba samy handray anjara amin’ny fanaraha-maso ny voa novoleny, hoy ny fanazavana, ankoatra ny fambolena.